Homeसमाचारअमिताभ बच्चनले आफ्नो जन्मदिनमा फ्यानहरुलाई दिए यस्तो सरप्राईज
October 11, 2020 admin समाचार 7330
भार’तीय फिल्म जगतका महाना’यक अमिताभ बच्चनले १९६९ मा ‘सात हिन्दुस्तानी’ मार्फत बलि’उडमा डेब्यु गरेका थिए । उनै महाना’यकको आज ७८ औं जन्म’दिन हो । उनी ११ अक्टुबर १९४२ मा जन्मि’एका थिए । कोरो’नाको कारण उनको यस पालीको जन्मदिन भव्य’ताका साथ मनाउन नसकि’एता पनि परिवार र केही आ’फन्तहरुको बीचमा उनले आ’फ्नो जन्म’दिन मना’एका छन् ।
उनको ७८ औं जन्म’दिनको अवसरमा उनका फ्या’नहरुले उनलाई शुभकामना दिएका छन् । महानायक बच्चनलाई आज दिनैभरि सामाजिक स’ञ्जाल मार्फत शुभ’कामना दिनेह’रुको ओईरो नै छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि युवा अभिनेता र समर्थक’हरुका लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बनेका महा’नायक बच्चन बलि’उडका मात्र नभई पुरै दुनि’याकै ढुकढुकी हुन् ।
अमि’ताभ केवल उत्कृष्ट अभिन’यमात्रै होइन पात्र’अनुसार आफ्नो लुक्स बदल्नस’क्ने खुबीका का’रण पनि चर्चामा रहन्छन् । फिल्म पा मा अमि’ताभको लुक्सले फ्यान’हरुलाई छक्क पारेको थियो । य’समा उनले प्रोग्रेरि’या नामक दुर्लभ रोगसँग जुधि’रहेका १२ वर्षका एक बच्चाको भूमिका निर्वा’ह गरेका थिए । यस फिल्ममा अमि’ताभका छोरा अभिषेक भने उनको बाबुको भूमि:कामा थिए ।
फिल्म झुम बराबर झुममा अमिता’भको निकै छो’टो रोल थियो, तर उनको हिप्पी अन्दाज फ्यान’हरुबीच निकै लोकप्रिय भयो । फिल्म शहंशाहमा अमि’ताभ बच्चको लुक्स र उनको पहिरनलाई लिएर पनि धेरै चर्चा भयो, यस फि’ल्ममा उनी न्याय दिने एक व्य’क्तिका रुपमा देखिएका थिए, जो रातमा आफ्नो हु’लिया बदलेर बाहिर निस्कन्छ ।
फिल्म १ सय २ नटआउ’टमा अमिता’भले १ सय २ वर्षका व्यक्तिको भूमिका निभा’एका थिए । यस कमेडी फिल्म पनि समर्थकहरुमाझ निकै चर्चित बनेको थियो । गुला’बो सिताबो, बुम, हलिउड फिल्म द ग्रेट ग्याट्सबी’लगायत फिल्ममा पनि अभिताभको लुक्स फरक थियो । सुपरहिट फिल्म लावारिसको ‘मेरे अंगने में’ गीतमा उनी एक म’हिलाको भूमिकामा देखि’एका थिए । -इताजा खबर बाट
December 6, 2020 admin समाचार 4672
अस्ट्रेलियामा रहेका भ’र्सटायल कलाकार मिलन मिश्र अभिनित ‘देउन दिलमा दरबन्दी’ गीतको म्यु’जिक भिडियो सार्व’जनिक भएको छ। डान्सिङ शैलीको यस गीतमा गा’यिका अस्मिता अधिकारी र गायक उमेश खत्रीको यु’गल गायन रहेको छ । देवल भण्डा’रीको शब्द
October 10, 2020 admin समाचार 8009
April 5, 2021 admin समाचार 2424
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205236)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196616)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196118)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (195970)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194411)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194108)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192343)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (191924)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184751)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161429)